Ny Semalt Expert dia manambara ny fomba famakiana ireo data avy amin'ny tranonkala
Ity dia fampahalalana taona, ary betsaka ny fampahalalana Ny tranonkala azo ampiasaina hanatsarana ny fiainan'ny olona ary azo ampiasaina amin'ny orinasa. Indrisy anefa, ny fanangonana ireo angon-drakitra ireo dia tsy nampahery loatra. Mitaky loharanom-bola betsaka izany mba hanangonana tahiry betsaka.
Noho izany dia ilaina ny fandaharam-pampianarana manokana izay afaka manampy amin'ny fanangonana, fizahana ary fandinihana ireo angona amin'ny endrika mora ampiasaina. Ny endriky ny data momba ny angona dia fampiharana manokana natao hanesoana ny angona avy amin'ny tranokala. Tsy vitan'ny hoe manaisotra sy mitahiry ny angon-drakitra izy ireo, fa mahavita haingana ihany koa.
Mba hijanona ho tompon'andraikitra amin'ny raharaham-barotrao, tsy safidy ho anao ny mianatra momba ny fonosana , dia lasa tsy maintsy. Mila mianatra ny fomba fampiasana azy ianao, ary mila mianatra ihany koa ny fomba fampiasana ireo angona angoniny ho anao. Raha ny marina, ny sasantsasany amin'ireo mpifaninana aminareo dia efa mampiasa izany mba hahazoana tombony amin'ny fifaninanana.
Ohatra, mila mahafantatra ny vidin'ny mpifaninana atolotra anao mandrakariva ianao satria ny vidiny dia singa manan-danja ho an'ny mpanjifa hanapa-kevitra ny amin'izay hividianana ny vokatra avy aminy. Azonao eritreretina ve ny habetsaky ny varotra sy ny mpanjifa izay ho very raha mitaky mihoatra ny 48 ora ianao mba hahalalanao fa ny mpanjifanao lehibe indrindra dia manapaka anao amin'ny mpanjifa haingana kokoa noho ny $ 2 fotsiny? Noho izany, mila manara-maso mandrakariva ny mpifaninana. Iray amin'ireo antony maro ilainao ny fanivanana ny angona angona..
Nanazava ny antony mahatonga ny olon-drehetra hanangona antontam-baovao, eto ny WebSundew. Kitapo maromaro amin'ny tranokala maromaro izany. Izany dia novolavolaina hanampy anao sy ireo mpampiasa hafa hanatsotra, hanamora sy hanamafisana ny volavolan-tranonkala .
Ny fanasitranana ny tranonkala dia ny fomba fanangonana ny endri-tsoratra sy sary rehetra avy amin'ny tranonkala samihafa noho ny antony samihafa. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity, dia afaka manaisotra ny vaovao ilaina ianao, manova izany any amin'ny endrika nofinidy ary manangona izany any amin'ny toerana tianao kokoa.
WebSundew dia sehatra efatra misy vokatra avy ao amin'ny WebSundew Enterprise, WebSundew matihanina, WebSundew Standard, ary WebSundew Lite. Ireo dikan-teny rehetra dia afaka manaisotra tanteraka ny angona sy ny sary avy amin'ny tranonkala samihafa afa-tsy ny WebSundew Lite izay tsy ahafahana mijery ny download.
Azonao atao ny manamboatra ny angon-drakitrao, mamaritra ny toerana ahafahan'ireo angon-drakitra voatahiry, ary mampiavaka ny sary avy amin'ny lahatsoratra. Tena tsotra izany. Tsy maintsy ampiasaina fotsiny ny fanontana mety amin'ny tranokala momba ny angona WebSundew.
Tsy voatery ho olona ara-teknika na programa iray ianao mba hampiasa ny iray amin'ireo rakitra ireo. Mora ampiasaina izany. Raha ny marina, izy io dia manolotra fomba tsotra sy mora ampiasaina miaraka amin'ny mpampiasa mpikaroka mahazatra. Ny famoahana WebSundew dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo mpandika tranonkala tsara indrindra.
Ny endri-javatra mahavariana indrindra amin'ireo fitaovana dia ny fahafahan'ny mpiserasera mandray tahirin-tsoratra tsy misy fetra ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fitaovana no tanjona tsara indrindra ho an'ny fanangonana sy fametrahana angona anaty tranonkala Source .